I-GeoConverter ikuvumela ukuba udibanise iinombolo ezicwangcisiweyo ze-sms XSD-Geofumed
I-GeoConverter ikuvumela ukuba udibanise iinombolo ezidibeneyo ze-sms XSD
Yonke imihla, isiqhelo komgangatho e Spatial Data Neziseko akukho awusekho umsi astral, nibe ungafumaneki kwabo bazahlulele kwimingeni geomatics endle.
Kwimeko eSpeyin, Isihlomelo I - Amagama Geographical Geographic Institute lochaziweyo kukhubazeko yemigaqo ANOKUKHUTHAZA, isixelela ntoni imizimba karhulumente kunye namalinge zabucala ukuzibandakanya imilinganiselo zabo yokutshintshiselana ngolwazi landela le mbono phantse ukuhlanganiswa kwezwekazi.
Sisoloko sihlaselwa ngumbono Geobide, xa uzama ukuhlabalala nezixhobo zabantu benza okuqhelekileyo kunye nezicelo ezizimeleyo okanye zamahhala. inzuzo yayo inkulu kukuba kusetyenziswe ezifunwa iinkampani nabantu ingakumbi eSpeyin, ngokusekelwe kwimarike i miqulu eselugcinwe yokuzibophelela abathinjiweyo ukuba kuthengisa esinye isixhobo sokwenza zithwala zikhona abaninzi emarikeni kodwa Bazithule izisombululo ezizodwa ukuya kwinqanaba ezibonakala elula, 'Lowo Kufuneka kube yi-geofumed.
Njengoko kunjalo kwimiba esiye sakhuthaza ngayo, nangona ingazange ihlaziye i-suite ngendlela echanekileyo:
Ukusebenzisana ne-OGC idatha
I-CAD / GIS yokufikelela kwedatha
Ukubuyela kwisihloko sokulungelelaniswa nomzekelo we-INSPIRE, kuyathakazelisa umsebenzi awenzileyo GeoConverter, kwimveliso eqhotyoshelweyo kwiifayile zeGML ze-XSD UKUFUNA, i-clones i-XML nodes ngaphakathi kweeskimu ze-XSD.
Kukho iinxalenye ezithile zabantu abanobuchule obuhlukeneyo beelwimi ezahlukeneyo ngeelwimi ezahlukeneyo. KUNYE INSPIRE kuthathwa njengeyona nkalo ephezulu IgamaLaPlace, kwaye ngaphakathi koko unako / kufuneka ufake ezi zihlelo ezahlukeneyo kwiiklasi ezahlukeneyo GeographicalName I-Geoconverter ivumela ukuba kuqhutywe inkqubo yokuphinda i-nodes yonke yecebo le-XSD, ukwenzela ukuba kwisiphumo sokugqibela iindibano ezahlukeneyo ezisemthethweni zibonakaliswa ngokweelwimi.
Unokufumana kwakhona izinto ezingenazo iinkcukacha kuwo onke amaziko aseburhulumenteni. I-Geoconverter ivumela ukufaka ifom yangomqathango apho idala iklasi kuphela IGama lezeNdawo ukuba irejista inegama elisemthethweni.
Ngenxa yoko, oko kusenziwa umyalelo indalo iifayile eliqhelekileyo CAD / GIS, ukukhetha isidweliso lwesithuba (XSD), nto leyo nje ifayile yeXML kunye ezalathelwe uphuhliso structured zicacisa caracaterísticas ukuqhelana umaleko.
Emva koko, endaweni yokuchaza isicatshulwa ngasinye ngokubhekiselele kwisicwangciso se-INSPIRE, okwenzayo kukuqamba i-node yokwenza omnye umzekelo kwixwebhu lokuphuma. Kwakhona kunokwenzeka ukukususa okanye ukunikezela intsingiselo yenguqu.
Post edlulileyo«Edlulileyo MundoGEO # Xhuma i-2013, yonke into ilungile
Post Next gvSIG 2.0 kunye noLawulo loMngcipheko: I-2 webinars isondelaOkulandelayo "